इंग्ल्याण्डलाई रोक्न सक्ला त क्रोयसियाले ?? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
इंग्ल्याण्डलाई रोक्न सक्ला त क्रोयसियाले ??
काठमाडौँ । यो पटकको विश्वकपमा सबैभन्दा भाग्यमानी टोली इंग्ल्याण्डलाई मानिएको छ । फुटबल विश्लेषकहरुका अनुसार हालसम्म इंग्ल्याण्डले बलियो टोलीको सामना गरेको छैन । लिग समुहमा प्लान बीका खेलाडीहरु बेल्जियम सामु उपस्थित गरेका कारण पराजित भएको इंग्ल्याण्डले मास्टर प्लान बनाएको उनीहरुको ठम्याइ छ ।
जारी विश्वकपमा एक खेल हारेको इंग्ल्याण्डले विश्वकपको सेमिफाइनल खेलमा आज राति क्रोयसियासँग आमनेसामने गर्दैछ । एकपटक विश्वकप उपाधि जितिसकेको इंग्ल्याण्डलाई पराजित गर्दै फाइनलमा जाने दाउमा क्रोयसियासँग पनि रहेको छ । इंग्ल्याण्ड र क्रोयसियाको यो आठौँ भेट हो जसमा इंग्ल्याण्डले चार खेल जितेको छ भने एक खेल बराबरी खेलेको छ ।
सन् २००४ मा भएको युरो कपमा इंग्ल्याण्डले क्रोयसियालाई ४–२ गोलले पराजित गरेको थियो । इंग्ल्याण्डको यो तेस्रो सेमिफाइनल अनुभव हो । सन् १९६६ मा पोर्चुगललाई इंग्ल्याण्डले २-१ गोलले पराजित गरेको थियो । त्यस्तै सन् १९९० मा जर्मनीसँग इंग्ल्याण्ड पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित भएको थियो ।
जारी विश्वकपमा आठ जना खेलाडीले क्रोयसियाका लागि गोल गरेका छन् । इंग्ल्याण्डका लागि ह्यारी केन, डि अली, रहिम स्टर्लिङ, मार्कस र्यासफोर्ड, हेण्डरसन, काइलियन वाल्कर जस्ता खेलाडीहरु उच्च फर्ममा रहेका छन् । ह्यारी जारी विश्वकपका सर्वाधिक गोलकर्ता हुन् ।
उनलाई रोक्न क्रोयसियाका प्रशिक्षक डालिकले मास्टर प्लान समेत बनाएको बताएका छन् । क्रोयसियाका लागि लुका मोड्रिक, मारियो माण्डुजकी, लोभरेन जस्ता खेलाडीहरु उच्च लयमा रहेका छन् । तर, फुटबल विश्लेषकहरुका अनुसार यसपटकको विश्वकपमा इंग्ल्याण्ड भाग्मानी टिम भएका कारण विश्वकप जित्न सक्ने सम्भावना बलियो रहेको छ ।